स्वस्थ्य Archives - Page2of 23 - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
अधिकांश घरमा खोज्ने हो भने, उच्च रक्तचापको रागी भेटिन सक्छ । बुढ्यौलीसँगै उच्च रक्तचापको समस्या देखिन थाल्छ, जो स्वभाविक हो । तर, अहिले बुढ्यौलीमा मात्र होइन, युवा र किशोरहरुमा समेत यस्तो समस्या देखिन थालिएको छ । खासगरी वर्तमानमा हामीले जुन किसिमको जीवनयापन भोग गरिरहेका छौं, त्यो उच्च रक्तचापको कारण बनिरहेको छ । ऐशआरमपूर्ण जीवन, प्रशोधित…..
दिनभरमा हामी कुनै न कुनै कुराले चिन्तित हुन्छौं । करियरको कुराले, पैसाको कुराले, विफलताको कुराले, साथीभाईको कुराले, शारीरिक रोगको कुराले, छोराछोरीको कुराले, परिवारको कुराले । मानविय जीवनमा चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । हामी चेतनशिल छौं, चिन्ता हुन्छ नै । तर, जब चिन्तालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं, त्यसले हामीलाई मानसिक रोगी बनाउँछ । किनभने चिन्ता एक किसिमको…..
जान्नुहोस् टाउको दुखाइका ३ अवस्था
टाउको दुखाइ प्रायः मानिसलाई हुने समस्या हो । धेरैले यसलाई सामान्य रूपमा पनि लिन्छन् । तर, यो समस्याले एक–दुई दिनदेखि वर्षौंसम्म पनि दुःख दिन सक्छ । लामो समयदेखि टाउको दुखिरहेको छ र औषधि खाने वेलामा मात्र निको हुने समस्या भए राम्रैसँग जाँच गराउन जरुरी हुन्छ । यी हुन् टाउको दुखाइका कारणः डा. प्रदीप पाण्डे ,…..
सबैको बानी नै बनेको छ, बजारबाट केही फल या तरकारी ल्याएपछि फ्रिजमा राखिदिने । मान्यता छ कि फ्रिजमा राखेपछि जुनसुकै चिज पनि लामो समयसम्म ताजा र सुरक्षित रहन्छ । तर, यो धारणा गलत हो । कतिपय चिज फ्रिजमा राख्दा हामीले सोचेभन्दा ठीक उल्टो परिणाम निस्किन्छ । जानिराख्नुहोस्, यी चिज फ्रिजमा नराखेकै राम्रो हुन्छ : ब्रेड…..
Page2of 1 « Previous 1234… 23 Next »